Metrobus သို့အပိုခရီးစဉ် ၃၂၀ | အစ္စတန်ဘူလ် RayHaber | raillynews
[28 / 01 / 2020] အစ္စတန်ဘူလ်ပုဂ္ဂလိကအများပိုင်ဘတ်စ်ကားများသည်ငလျင်ဒဏ်ခံရသူများအတွက်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[28 / 01 / 2020] Izmir ရထားလမ်းများသည်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုမှပိတ်ဆို့ခြင်းခံရသည်။	35 Izmir
[28 / 01 / 2020] ပြည်တွင်းကားများ၏စျေးနှုန်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်!	16 Bursa
[28 / 01 / 2020] ဆမ်ဆန်တွင်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေလျှော့	55 Samsun
[28 / 01 / 2020] BAKKA စီမံခန့်ခွဲမှုKARDEMİRတွင်တွေ့ဆုံသည်	78 Karabük
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်320 အပိုဆောင်းအချိန် Metrobus | အစ္စတန်ဘူလ်
07 / 01 / 2013 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Metrobus
320 အပိုဆောင်းအချိန် Metrobus
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သောကြောင့်, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မျှော်မှန်းနှင်း၏ထိရောက်သောဖြစ်အစီအမံတစ်ခုစီးရီးကိုယူ။ IMM ဖွငျ့ရေးသားထားသောကြေညာချက်မှာတော့ tools များနှင့် 9082666 တထောင်ဝန်ထမ်းများ www.unodc.org မိုဃ်းပွင့်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါ 320 Metrobus အတွက်စည်ပင်သာယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏နှောင့်အယှက်ပြုမိပါလိမ့်မည်ကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်နောက်ထပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကြေညာခဲ့သည်။
မိုဃ်းပွင့်အုတ်အုတ်သဲသဲအစ္စတန်ဘူလ်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အတွက်နေ့ချင်းညချင်းအကျိုးသက်ရောက်ယူလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ဖွငျ့ရေးသားထားသောကြေညာချက်ထဲမှာနှင်းတိုက်ပွဲများအားထုတ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ IMM ဖွငျ့ရေးသားထားသောကြေညာချက်ထဲမှာ; "မိုးလေဝသ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့်လက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရရောဂါပျောက်ကင်းထယ်အုတ်အုတ်သဲသဲနှင့်ယနေ့စတင်အဓိကသွေးလွှတ်ကြောအဖွဲ့သည် salting ခဲ့ကြသည်။ အသင်းများကိုနှင်းခဲများနှင့်ရုတ်တရက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများကိုဆန့်ကျင်ဆိုင်းငံ့အသငျ့။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဌာနဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့် DCC နိုင်ငံတော်သမ္မတ Muzaffar Hacımustafaoğlu IETT İSKİ, BEDAS İgdAŞ, Ido- အရာရှိများသည် IMM ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များ, သက်ဆိုင်ရာဒါရိုက်တာများခေါင်းနှစ်လုံး, အစ္စတန်ဘူလ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာန, အဝေးပြေးဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာနှင့် DCC ကိုယ်စားလှယ်များ '' မကောင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်အတူရုန်းကန်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်။ "ဟုအဆိုပါကြေညာချက်ကဆိုသည်။
ကြေညာချက်ထဲမှာအစ္စတန်ဘူလ်ရဲဌာနယာဉ်အသွားအလာထိန်းချုပ်ရေးဌာနခွဲအဖွဲ့များကြောင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလတာယာလည်းထင်ရှားစေလမ်းမများပေါ်တွင်နေထိုင်နိုင်ငံသားများ Sariyer Metin Oktay အားကစားစက်ရုံအတွက်ဧည့်သည်များဖြစ်ခြင်းနေကြတယ် "အမျိုးမျိုးသောဒေသများတွင်အကောင်အထည်ဖော်မှုစတင်ခဲ့သည်။ ယနေ့နိုင်ငံသားများ 250 စက်ရုံအဖြစ်နံနက်ယံ၌တည်းခိုနေကြသည်။ ကနျြးမာရေး၏အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နိုင်ငံသားများ, အဝတ်အစား, အစားအသောက်, အမိုးအကာလိုအပ်ချက်များတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ဆောင်းတွင်းရာသီအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၏မူဘောင်ထဲမှာစုစုပေါင်း 43 1 အတွက် xnumx'inc ဦးစားပေးလမ်းကြောင်းတထောင်အရှည်လမ်းကွန်ယက်၏ကီလိုမီတာနှင့်အစီအမံ 2553အပါအဝင်ရာသီဥတုအခြေအနေများနှင့်အတူတစ်ဦးရန်ပွဲကို ယူ. ထိုစတုရန်းအတွက် "ဟုအဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်များ၌ပေးသောခဲ့ကြသည်။
သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်ခဲ့2THOUSAND တန်ချိန်
အဆိုပါ282 ခုနှစ်တွင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၏တထောင်တန်ချိန်အာရုံကိုဆွဲရေးသားထားသောကြေညာချက်ထဲမှာနှင်းဖုံးလမ်းများပေါ်ဖြန်းခံရဖို့2"တထောင်တန်ချိန်ဖြေရှင်းနည်းကနေသီးခြားစီသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။ တစ်နာရီစွမ်းရည်နှုန်း 25 တန်ချိန်ဖြေရှင်းချက်အတွက်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများလျှင်ပြုမိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အပြင်အဓိကသွေးလွှတ်ကြော, ရင်ပြင်, အထက်နဲ့အောက်တံခါးကူးတို့ဆိပ်ကမ်းများ, ဘတ်စ်ကားရပ်, entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်ဆေးရုံ, တက္ကသိုလ်နှင့်ဆီးနှင်း-တိုက်ခိုက်နေအဖွဲ့များအနေဖြင့်လည်းကျောင်း entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမြို့တော်ဝန်Topbaşနှင့်ရာသီဥတုဆိုးရွားအခြေအနေများတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်ဒီနှစ်အလေ့အကျင့်ထဲသို့သွင်းထားမကြာခဏသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟု "ဆောင်းရာသီတာယာ" application ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆို။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ယာဉ်များအတိတ်နှစျတှငျဤလျှောက်လွှာကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ "ဒီကြေညာချက်ကဆိုသည်။
"ဟုအဆိုပါလုပျငနျး DCC မီးသတ်ညှိနှိုင်းရေး, 456ရေးသားချက်များအတွက်ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်: အဆိုပါကြေညာချက်တွင်အောက်ပါပေးခဲ့66 135 ဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Tool ကိုနှင့်ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူပါဝင်ဆောင်ရွက်။ ပန်းခြံများနှင့်ဥယျာဉ်ညွှန်ကြားမှု; Kadikoy Taksim, Sarachane, Yenikapi, Eminönü, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Göztepe, ထိုလင်းယုန်ရင်ပြင်; အဆိုပါဝန်ထမ်း 230 31 ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလတိုက်ပွဲတွေမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုဖြုန်း; ရင်ပြင် 13, 310 Stop, Upper နှင့်အောက်ပိုင်းဂိတ် 123,7အပင် processing, ဘူတာလွှဲပြောင်းပယ်, ခြံလမ်းန်ထမ်းများနှင့် 581 54 ယာဉ်များနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါလိမ့်မည်။ 142 ထွန်စက်နှင်း၏တာဝန်အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အဖွဲ့အကြီးအကဲလယ်ထွန်ခြင်းကိုသူတို့၏ကျေးရွာများဖို့လမ်းဖွင့်လှစ်ရန်တာဝန်များကို၏ဌာနခွဲဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
နှင်း-တိုက်ခိုက်နေယာဉ်များ 9082266 တထောင်န်ထမ်းအစ္စတန်ဘူလ်၏ကလူကိုဝတျပွုပါမညျစုစုပေါင်း။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ဦးစားပေးဆုံးဖြတ်, ဘူတာရုံ, ထိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုပြီးစီးခဲ့ခံရဖို့အဓိကသွေးလွှတ်ကြော, ပါဝင်မှုအချက်များ, လမ်းဆုံနှင့် e-5 မတိုင်မီချက်ချင်းမိုးရွာခြင်းနှင့်မိုးရွာသွန်းမှုကိုဖန်ဆင်း၏။ သင်္ဘောသားကိုပထမဦးဆုံး 255 icing လမ်းကြောင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအသင်းများကိုကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားခံရဖို့3နာရီအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်ပြုခံရဖို့အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့ကအသိပေးစရာမလိုဘဲတင်ပို့ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်ပြီးနောက်နောက်ဆုံး 45 မိနစ်။ ပိတ်ဆို့ခံရဖို့အချိန်နှင့်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းမလိုအပ်သောစွန့်ပစ်။ လိုအပ်သောလျှင် DCC တည်ဆဲမော်တော်ယာဉ်ခြေရာခံခြင်းစနစ်ဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခံရဖို့ပွင့်လင်းလေ့လာမှုများအတွက်လုပ်ခံရဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်အဆိုပါမော်တော်ယာဉ်များ, ဆီးနှင်းထယ်နှင့်လမ်းလမ်းကြောင်းများ, မော်တော်ယာဉ်များကိုအခြားဒေသများသို့ညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်။ အရေးပါသောလမ်းလမ်းဆုံ 40 စုစုပေါင်းကယ်တင်သောသခင်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်ယာဉ်မတော်တဆမှုနာရီ 24 "ဆန့်ကျင်ရပ်တည်ရန်အဆင်သင့်ရှိနေဆဲဖွယ်ရှိ
ကြေညာချက်မှာတော့ပြည်တွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Metrobus 320, 880 များ၏နှောင့်အယှက်ဘတ်စ်ကားလိုင်းအပိုအချိန်ကို run ပါလိမ့်မယ်ဆိုပါကသတ်မှတ်ထားသောခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်: www.iha.com.t ဖြစ်ပါသည်
မသန်စွမ်းသူများအတွက် Metrobus ရယူမနိုင်
Metrobus 10 စီး၏ရွှေစည်းမျဉ်း
အချိန် Metrobus အချိန်အစီအစဉ်ကိုသတ်မှတ်
RayHaber 07.01.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
Ayvalıkလမ်းများသည် Plate Works နှင့်ပိုမိုလုံခြုံသည်
Balıkesir Gar Road သည်Bahçelievlerအသွားအလာကိုသက်သာစေလိမ့်မည်
SAI: IMM မှ ၀ င်သင့်သော Shopping Centre ၏ဝင်ငွေခွန်
City Centre ရှိ President Büyükkılıç Erciyes သို့မဟုတ်ဟိုတယ်လိုအပ်သည်
အနာဂါတ်အမျိုးသားအားကစားသမားများသည် Zigana Ski Centre တွင်ကြီးထွားလာသည်
လူတိုင်း Boztepe Cable Car သို့စုရုံးရောက်ရှိလာကြသည်
Mersin Metro သည်မြို့ကိုယူဆောင်လာပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလျှော့ချမည်